भ्रष्टाचार निवारण होला त ?
आजभोलि जताततै भ्रष्टाचारबारे चर्चा सुनिन्छ । सञ्चारमाध्यममा पनि यही विषय नै छाएको छ । भ्रष्टाचार हजारौं वर्षदेखि मौलाउँदै आएको छ, नेपालमा मात्रै होइन, विश्वभरि नै यो विद्यमान छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न निकाय बनाइएका छन् । भ्रष्टाचारको समर्थन गर्ने र यसलाई मन पराउने कतै कोही हँुदैनन् । सबैले विरोध नै गर्छन् । तर, भ्रष्टाचार झन् बढ्याबढ्यै छ । नेपालमा जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्था आए पनि वा सत्तामा जो बसे पनि भ्रष्टाचार यथावत् छ ।
बगलीमा छुरा मुखमा रामराम
नेपालमा त अचम्म भयो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका सदस्य नै भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् । भ्रष्टाचारको घोर विरोध गर्ने र त्यसबारे विभिन्न कार्यक्रम गर्दै हिँड्ने संस्थाका प्रमुख नै भ्रष्टाचार गर्छन् । विरोध भएपछि लुक्दै हिँड्छन् र भूमिगत हुन्छन् ।
त्यसैले प्रश्न उठ्छ, भ्रष्टाचार निवारण होला ? के भ्रष्टाचारबिनाको देश वा समाज सम्भव छ ?
भ्रष्टाचार र पुँजीवादबीच मितेरी साइनो
यथार्थ यो हो, पुँजीवादी व्यवस्था कायम रहेसम्म भ्रष्टाचार उन्मूलन हुनै सक्दैन । समाजमा पुँजी वा पैसाको आवश्यकता, महत्त्व र मानसम्मान भएसम्म कसरी हुन्छ भ्रष्टाचार निवारण ? जुन व्यवस्थामा जे गर्दा पनि पैसा चाहिन्छ, पैसा नभई केही हुँदैन, पैसा हुने मान्छेकै मानसम्मान हुन्छ । पद–प्रतिष्ठा र अवसर पनि त्यस्तै मान्छेले नै पाउँछन् । त्यो व्यवस्थामा भ्रष्टाचार हुनु सामान्य र स्वाभाविक हो ।
तर, यस्तो व्यवस्थामा कसैले भ्रष्टाचार गर्दैन भने शंका लाग्छ । उसले नजानेर, नसकेर र डराएर भ्रष्टचार नगरेको हो । पुँजीवादी व्यवस्थामा भ्रष्टाचार नहोस् भन्ने चाहनु डुङ्डुङ्ती गन्हाउने कुकुर काखमा लिएर मगमग बास्नाको अपेक्षा गरेजस्तै हो ।
भ्रष्टाचार नहुने त्यो समय
वास्तवमा मानव समाजको प्रारम्भमा पुँजी, सरकार, प्रहरी, सेना र अड्डा–अदालत कही थिएन । समाज वास्तवमै साम्यवादी थियो । समतामूलक समाज थियो, सबै बराबर । त्यो व्यवस्थामा भ्रष्टाचार हुन्थेन । भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि थिएन । तर, यस्तो पुँजीवादी व्यवस्थामा त भ्रष्टाचारको जतिसुकै विरोध गरे पनि रोकिन्न, न्यूनीकरणचाहिँ होला ।
एउटाले नगर्ला, अर्कोले गर्छ । नेपालमा नहोला, अर्को देशमा हुन्छ । धेरै नहोला, थोरै होला । आज नगर्ला, भोलि गर्छ । तर, भ्रष्टाचार हुन्छ, हुन्छ ।
भ्रष्टाचारको अचुक औषधि
भ्रष्टाचार न्यूनीकरण तथा उन्मूलनका लागि विद्यमान पुँजीवादी व्यवस्था ध्वस्त पारेर समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्नुपर्दछ । त्यस्तो व्यवस्थामा राज्यले नै जनताको भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्योपचार आदि सबै कुराको जिम्मा लिएको हुन्छ र व्यवस्था गरेको हुन्छ । मान्छेलाई थप पैसा कमाइरहन जरुरतै हुँदैन र भ्रष्टाचारै हुँदैन । समाजवादी व्यवस्था भएका देशमा भ्रष्टाचार हुँदैन वा भए पनि एकदमै कम भएको पाइन्छ । तर, भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने मान्छेहरू कसैले पनि यस्तो व्यवस्था ल्याउने कुरा गरेको देखिन्न ।
मान्छेहरू त मुख्य व्यवस्थालाई छुँदै छुदैनन् । प्रहारै गर्दैनन्, फलानो व्यक्तिले यति भ्रष्टाचार ग¥यो, उस्तो भ्रष्टाचार ग¥यो भनेर बिलौना मात्रै गरिरहन्छन् । व्यक्तिमै केन्द्रित हुन्छन् र त्यस्ता भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुप¥यो भन्ने माग गर्छन् र कारबाही भयो भने मक्ख परिरहेका हुन्छन् । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने कुरा एकदमै सही पनि हो । तर, त्यो सबै वाहियात हो । किनकि पछि फेरि मौका पाउँदा ती मान्छेहरू नै स्वयं भ्रष्टाचार गर्छन् । पैसा तिनीहरूलाई पनि चाहिएकै हुन्छ ।
भ्रष्टचारको जरा पहिचान नगरी केवल हाँगाबिगा र पातहरूलाई समात्छन् । यसरी त कहाँ हुन्छ र भ्रष्टाचार निवारण ? जरा नै जिउँदै रहेपछि त हाँगाबिगा र पातहरू पलाइहाल्छन् नि ! त्यसैले जनताका आधारभूत आवश्यकताको जिम्मा राज्यले लिने व्यवस्था अर्थात् समाजवादी व्यवस्था नै भ्रष्टचारको अचूक औषधि हो । यो व्यवस्था ल्याउन इच्छुक र तयार छन् त मान्छेहरू ? तयार छैनन् भने भ्रष्टाचारविरोधी विचार तथा गतिविधि केवल नौटंकी हो ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख ३१, २०७६, ०१:४४:००